i-App yeBhayibheli yezingane Archives - YouVersion
Category: i-App yeBhayibheli yezingane
Posted on 2018-02-09 2018-02-12
Manje izingane sezingakwazi ukuzitholela i App yebhayibheli yezingane ngesiZulu!
Namhlanje, sisonke ngokubambisana nabalingani bethu i- OneHope, siyathokoza ukunazisa ngokokuqala i-App yeBhayibheli yezingane nge siZulu. Manje, izingane eziningi kunakuqala, sezinethuba lokuthokozela iBhayibheli ngokwazo.
Ukuya kwezinye izilimi ngokulula, phakathi kumaSethingi e App
Yenza isiqiniseko sokuthi u-Update i-App kule esisanda kuyikhipha.
Vula i-App mase Thinta i-Icon eyigiya ( ) ukuvula AmaSethingi.
Thinta ulimi mase ukhetha olidingayo.
i-Audio isizodlala ngalololimi, kanye nayo yonke imibhalo ngalelolimi
Sicela usisize ukuthokozela lezi zindaba ezimnandi!
Nge App yeBhayibheli yezingane
yenziwe ngokuhlanganyela ne OneHope, i-App yeBhayibheli yezingane isuka kwi YouVersion, abakhi be App yeBhayibheli. Yakhiwele ukunikeza injabulo egcwele eBhayibhelini ngokwabo, i-App yeBhayibheli yezingane isifakwe ngaphezu kuka 19 Million wama -Apple, Android, nakumaKindle, futhi ihlezi imahhala. Izingane zakuwo wonke umhlaba, sezithokozela i-App yeBhayibheli yezingane, ngezilimi ezingu 34 — manje sekuneyesiZulu!